Ogaden News Agency (ONA) – Dagaalo Xoogan oo ka Dhacay Gobolka Jarar oo Cadawga uu ku jabay
Dagaalo Xoogan oo ka Dhacay Gobolka Jarar oo Cadawga uu ku jabay
Posted by ONA Admin	/ March 15, 2015
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaadhay Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa ka warbixinaya 3 dagaal oo faraha lagaga gubtay uu ka dhacay Gobolka Jarar halkaasoo ciidanka Wayaanaha uu kazoo gaadhay khasaare laxaadle oo dhimasho iyo dhaawacba leh. Dagaaladan oo kadhacay meelo kala duwan oo Gobolka Jarar ah ayaa waxaa lagaga dilay cadawga ciidan gaadhay 48 askari oo darajooyin kala duwan lahaa iyo dhaawac farabadan.
Dagaaladaa oo socday 3ex maalin ayaa udhacay sidan.
10/3/15 Ijaguura oo Dagmada Gunagado ee Gobolka Jarar katirsan dagaal culus oo CWXO iyo kuwa gumaysigu xooga ku keenay Ogadenia ku dhexmaray waxaa cashir lama ilaawaan ah loogu dhiigay ciidankii wayaanaha oo laga dilay 19 askari 20 kalana laga dhaawacay.
12/3/15 Axmadgaab oo Dagmada Dhagaxbuur ee xarunta Gobolka Jarar katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 6 askari 9 kalana waa lagaga dhaawacay.
13/3/15 Garsad oo Dagmada Dhagaxbuur katirsan weerar qorshaysan oo ay Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia kuqaadeen ciidanka wayaanaha oo halkaas kusugnaa waxayna qudha kaga jareen 23 askari 27 kalana way kaga dhaawaceen.